Tuyển Tập 10 Áng Thơ Hay Nhất Của Ông Quan Nguyễn Công Trứ | Anybook.vn - Anybook
Tuyển Tập 10 Áng Thơ Hay Nhất Của Ông Quan Nguyễn Công Trứ | Anybook.vn
Nguyen Cong Tru (1778-1858) dia teraka tao amin’ny tanànan’i Uy Vien, distrikan’i Nghi Xuan, any Ha Tinh ankehitriny. Izy dia manam-pahaizana manan-talenta sy tapa-kevitra izay naniry ny hanana laza sy harena, dia nasandratra imbetsaka ho mandarinina, saingy mbola nanompo tamim-pahatokiana ny Dynastie Nguyen. Niaina fiainana mahantra izy, tia fahafahana, malalaka ary tena sahisahy sy miavonavona ny toe-tsainy. Nanampy ny olona hanitsaka ny ranomasina izy, nanangana ny distrikan’i Kim Son (Ninh Binh) sy Tien Hai (Thai Binh). Teo amin’ny faha-80 taonany koa dia nanolotra ny tenany hitarika ny tafika hanafika ny Frantsay izy, saingy noho ny fahanterana dia tsy nekena izy, ary tamin’io taona io ihany, dia maty izy.
Manodidina ny 150 eo ho eo ny tononkalony, ny ankamaroany dia tononkalo Ca Tru sy Nom. Ary eto, manasa anao izahay hijery ny 10 amin’ireo tononkalony tsara indrindra sy malaza indrindra, ny tononkalo tsara indrindra an’i Nguyen Cong Tru, dia mirary anao hamaky tsara!
1 1, Ny Hira Lehibe
2 2, Chi Lam Trai
3 3, Pine Bay
4 4, Chi Nam Nhi
5 5, Raiso ny fanadinana ho an’ny tena
6 6, Voaloboka Koreana misy tsiron-tsakafo
7 7, Ilay Mpamono
8 8, Fitiavan-tena
9 9, Lalao Fiainana
10 10, Raiso ny Fitsapana Fahafatesana Lesona 1
1, Ny Hira Lehibe
Ny tontolo anaty dia tsy anisan’ny asa
Atoa Hi Van Tai Bo dia niditra tao amin’ny tranom-borona
Rehefa ny valedictorian, rehefa ny mpanolo-tsaina, rehefa ny Governora jeneraly Atsinanana
Anisan’izany ny tetika dia nahatonga ny tanana ho kivy
Amin’ny fotoanan’ny fandriam-pahalemana, chess ankapobeny
Indraindray aho mankany amin’ny Lapan’i Thua Thien
Manaova fizarana fanatanjahantena isan-taona
Mitafy omby sy soavaly volamena, mitafy azy
Indro, rakotra rahona fotsy io tendrombohitra io
Ny tanana misy sabatra sy tsipìka dia tokony ho tsara fanahy
Manaraka ny tampon’ny nenitoany ilay andriamanitra fairy
Mampihomehy ihany koa i Bouddha fa torana
Mahazoa ary very yang, ny regent
Derao sy tsikerao ny tampon’ny maple ririnina
Rehefa mihira ianao, rehefa misotro, rehefa misotro, rehefa mihira
Tsy misy Bouddha, tsy misy angano, tsy misy fikorontanana
Not Left, niditra tao amin’ny paroasin’i Han sy Phu ihany koa ny mozika
Ny tian’ny mpanjaka holazaina dia ny hitazonako ny fivavahako
Ao amin’ny fitsarana izay reraka toa azy!
Ny faribolan’ny lanitra sy ny tany dia mitsivalana sy mitsangana
Fandoavana trosa trosa
Chi dia lahy, avaratra, atsinanana, andrefana
Omeo hery aho hiady amin’ny dobo efatra
Tsy misy zava-kanto mihitsy ny fiainan’ny olombelona
Vonjeo ny dan dan han Thanh
Iza no mahatoky fa voninahitra ny henatra
Ireo izay mahafantatra ny mahery fo amin’ny fotoana nohazavaina
Misy fotoana ny rahona mipoitra
Nanapa-kevitra ny hitarika ny rivo-doza.
Ireo izay niezaka nanapaka tendrombohitra sy nameno renirano ihany
Manaova feo mahery fo any ho any
Malalaka sy malalaka ny lalan’ny rahona
Ny trosa fisaonana dia mitazona pejy fotsy sy mitehaka tanana
Kitapo mampitony divay bevohoka.
3, Pine Bay
Mipetraka malahelo ary manome tsiny ilay lehilahy maitso
Rehefa faly aho dia te hitomany, rehefa malahelo aho dia mihomehy
Mba tsy ho olombelona amin’ny fiainanao manaraka
Manaova hazo kesika mijoro eny amin’ny lanitra ary maneno
Eo afovoan’ny hantsana
Iza no mahatanty ny hatsiaka rehefa miakatra miaraka amin’ny kesika
READ Top 50+ Bài Thơ, Chùm Thơ Tình Yêu 4 Câu Hay, Ý Nghĩa Nhất Kèm Ảnh | Anybook.vn
Ny lehilahy manan-tsaina indrindra,
Vanim-potoanan’izao tontolo izao malemy.
Teraka i Trot rehefa tsy maintsy nandany vola,
Angamba mandany enina arivo telo arivo.
Saro-piaro amin’ilay zaza Create,
Ny trosan’ny trosa dia tapa-kevitra ny handoa.
Niditra an’ady, niezaka nitady tsipìka,
Ataovy mazava fa lehilahy ianao.
Teo amin’izao rehetra izao dia tsy maintsy nanao ny adidy,
Tsy maintsy manana izany anarana izany ho an’ny tendrombohitra sy renirano.
Tsy tokony hiverina ve ianao?
5, Raiso ny fanadinana ho an’ny tena
Aza mandeha fa mety hiverina?
Ny trosa tsy maintsy aloa amin’ny taratasy!
Mindrana tsingerintaona feno fifaliana
Trot no nitondra ny faty nitsena ny fandevenana
Nahazo laza any an-danitra sy ety an-tany
Inona no tsy maintsy manana lisitra miaraka amin’ny tendrombohitra sy ny renirano
Iza no mora fantarina eto amin’izao tontolo izao?
Dia mazava ny endrik’ilay maherifo
6, Voaloboka Koreana misy tsiron-tsakafo
Tetehina ray ny mafy!
Ny bao enina dia mampiseho andalana enina, mahay tsara ny fampianaran’ny sutra,
Ota iray alina no raisina aloha, tsy maintsy ananan’io ohabolana io.
Rindrina efatra miforitra,
Trano ahitra telo.
Ny lohan’ny tafo dia nofetsahan’ny kintana,
Eo anoloan’ny varavarana dia misy ridao misy rivotra ny hala.
Ny faladia volotsangana dia mizara ny antsasaky ny lakozia sy ny antsasaky ny efitrano,
Ny fantsona bamboo dia ahitana ny sisa amin’ny lohan’ny beanie.
Loham-pandriana volotsangana, termite mihodinkodina,
Ny zoron’ny rindrin’ny tany, ny kankana dia tafahoatra.
Ny aloky ny masoandro dia mamirapiratra amin’ny atodin’ny akoho eo amin’ny rindrina, ny zazalahy dia hendry,
Ny rotsak’orana dia mijery ny lavaky ny totozy ao an-trano, ny saka dia mijery ny manodidina.
Ao amin’ny kisoa, mandry eo amin’ny tavy ny kisoa, noana ary tsy te hitomany,
Teo an-tampon’ny tafo, ny totozy dia nanokatra ny vilany ary namela azy nalahelo.
Mihinana in-telo isan’andro, mikapoka ny kibony amin’ny kitapo misy anana, lehilahy iray mihinana tsy misy sakafo,
Fiambenana dimy alina, matory ao amin’ny trano fanatobiana entana, fiainana milamina, ny varavarana misokatra matetika.
Ny teapot dia mandray anjara amin’ny ravina coriander, mifangaro amin’ny fofona marikivy sy marikivy,
Tapaka betelina, hoditry ny plum, hoditra lava, vava malahelo mitsako, mandrora.
Ny palitao duffle dia mavesatra, mangatsiaka toy ny bodofotsy, mafana toy ny ondana, ny fizaran-taona efatra dia miova be,
Fanasan-damba mena, tsihy, pataloha, kilalao iray.
Misoroka ny hatsembohana, ny fandriana, ny fan mo,
Anti-etona, kapa hoditra, hazo clogs.
Sombitsombin’ny baranjely efa masaka, matsiro sy matsiro,
Kilalao misy mpankafy volotsangana sy bararata maro, aiza ireo.
Manampahaizana manokana amin’ny dite, tanimanga misy faucet vaky,
Ny fotoam-pisotroana, tandremo ny vilia.
Ny sary hosodoko entona antitra mihantona amin’ny rindrina, setroka ny setroka, manjavozavo ny lokon’ny rano,
Amin’ny dongona tanora, ny boky dia ahantona eo an-tampon’ny truss, ny kalalao dia mikasa azy, ny marika mena dia refesina.
Deck karatra, jeneraly taranaka telo, literatiora manjavozavo,
Papan échec, ain’olona fito trano mihantona, mahitsizoro feno mitongilana.
Feno tanimbary sofina loc ny tratra,
Phuong Chi dia manana kaopy misy ovy ao anaty harona iray.
Mandany vola amin’ny fandefasana mitsingevana, mazàna mitazona vola madinika varahina telo,
Ohatrinona ny vokatra, raha ny gong ny amboara iray,
Ny lamosina manify koa tsy manankarena,
Betsaka ny vava mahazo vola.
Rehefa tsy voaomana ny sakafo, dia nitomany toy ny tantely ny ankizy,
Ara-potoana indray ny mpitrosa, mikiakiaka toy ny vorondolo.
Ny fanafody dia mihodinkodina hanesorana ny sakafo, fa eritrereto ny hevi-diso indrindra, ny fomba mendrika ny dokotera,
Ny mpampianatra sy ny mpampianatra dia te handainga mba hahazoana sakafo, fa mieritreritra ny teny feno herim-po toy ny hoe, ny mazia dia mety ho malaza dharma master.
Ny hexagrams amin’ny vano dia manandrana mampiasa fitahiana masina, mandatsaka sira amin’ny ranomasina, tsy te handany izany aho,
Ny fasan’ny dragona marina dia niezaka nivarotra ny lanitra sy ny tany, ny fasana handevenana ny rainy, mba hahita toerana mbola bevohoka.
Manao varotra amin’ny asa mena, saingy mahagaga fa miezaka mitondra ny entana izy ireo, ka tsy mahazo tombony ny entana.
Ny filokana dia niezaka nanala ilay zaza mainty hoditra, tsy mbola vonona, ny tanàna dia natokana ny toerana, nangataka ny decanter mandrakizay mba tsy hivoaka.
Vohoka, vitsy ny olona tia satria,
Ny maso sahona, fantaro hoe aiza no hindrana vava.
Amin’ny faran’ny telovolana, raiso ny trosam-panjakana handany dong?
Rehefa tapitra ny lalana dia tsy maintsy mankamin’io varavarana io na io varavarana io ianao.
Lehibe sy kely ny vatako, sasatra ny mipetraka sy mitazona,
Nosafosafoiny tsikelikely ny volombavany mba ho mody.
Ny mpampianatra ahy, natahotra olona, ​​dia nankeo am-baravarana, nanondrika ny lohany,
Ny rahavaviko dia nanipy izany teo an-damosiny, nanondro ny molony.
Vitsy ny mpiara-monina tonga ao an-trano,
Ry malala tsy misy mijery azy ireo.
Very asa, mitady ho very asa, mangoraka ny fianakaviana nefa menatra ny rahalahy,
Teny an-dalana, manantena ny hanana finiavana mitovy amin’izany aho, matahotra aho fa tsy tokony ho sahy ny firenena.
Miaraka amin’ny ankizy sy ny zafikely miresaka tantara taloha, toa miroboka amin’ny fivavahana mahantra,
Mihaona aminao rehefa miresaka momba ny fiainana, vakio ny teny hoe micro-human un lucky.
Noho ny any an-danitra dia mahazatra izany lahatra izany,
Raha manana fahatsapana hatsaran-toetra ianao dia tsy hanaiky ny lanitra hafa.
Mampalahelo fa ny talenta lehibe dia tsy maintsy ao amin’ny fomban-drazana San Nguu Bamboo, ny marika tranainy an’i Mr. Pho Ong He,
Mila karma rehefa manao sary sokitra misy solifara, taloha, Khuong sy Vu.
Ao amin’ny tanàna ambany mitafy tsorakazo, indro ny nasionalista Hoai Am,
Ny toerana izay itondran’ny foibe ny hazo fisaka hozaraina, dia misy olona iray mikasa ny andriamanitra Duong martial.
Zara raha misy toa an’i Mai Than Mong Chinh, indraindray soavaly mitaingina parasol,
Iza no manankarena kokoa noho i Vuong Khai Thach Chong, manana rindrina nirodana ihany koa.
Sarotra satria any an-danitra,
Rich no isany.
Na iza na iza manana saha lalina, ombidia, ary vault,
Tsy dia fatiantoka loatra koa izany.
7, Ilay Mpamono
Esory ny mpikambana dimy amin’ny trano fonenana ambony,
Ny mponina ao amin’ny faritra efatra vi chi.
Raha misy tendrombohitra dia manana anarana ny manam-pahaizana,
Avy any Chu, Han, io manam-pahaizana io dia sarobidy.
Nidera izany fitiavam-bavaka izany ny tanàna niavian’ny Antoko
Ny fomba hanamafisana ny tena dia tsy maintsy mitazona ny voa
Ny rivotry ny hatsaram-panahy voajanahary dia be voninahitra
Noho izany dia feno ny entona marina tany an-danitra sy tany.
Rehefa mazava ny tsirony dia ny toeran’ny fibebahana no ihazonana ny ba kiraro
Ny tsirony mahafinaritra, San Soup
Na dia tsy nihaona tamin’i Thang aza izahay, Van
Confucianisme fehezanteny mazava vitsivitsy.
Mitazona ny lalana marina hamonoana ny ratsy
Ny hysteria dia nanaparitaka ny sakana rehetra
Dragona sy rahona rehefa mihaona amin’ny fikambanana efa voalahatra
Ento ny fananana manontolo hampiasaina.
Ao amin’ny tempoly dia misy talenta be dia be
Eo ivelan’ny sisin’ny lobe dia atao ny tsindrona orona Can Tuong
Ahoana no hamonjena izao tontolo izao
Manam-pahaizana aloha, avy eo minisitra.
Manomboka eo an-tampony ny kodiarana am-bavaka, eo afovoany ny fiadiana,
Manana fotoanan’ny adidy izao tontolo izao, lehilahy iray miezaka ny ho mahery fo.
Milamina ny firenena fa afaka ny miaramila
Tamin’izay izy vao nahita an’Andriamatoa Hoang Thach
Amin’ny taona fahatelo dia mihodinkodina ilay dongsaeng kely
Pepper ny toerana fanaovana welding kaopy Thanh Son
Tsy misy tononkalo, tsy misy divay, tsy misy fahavalo, tsy misy lokanga
Entana nivangongo tao anaty kitapo.
READ 1001 bài thơ Tết nhớ Cha Mẹ đã mất, thiếu hơi ấm ngày Xuân | Anybook.vn
Na iza nanontany, na iza tsy nanontany
Mieritreritra ny fiainana sy mijery ny sola
Tompo vaovao ity.
Mampihomehy koa ny asa mafy!
Mankahala ny miankohoka mihoatra noho ny hafa?
Ankehitriny, misy izany rahalahy sy anabavy izany,
Efa mpampivelona i Mai.
Eny na tsia, manahy mandritra ny androm-piainanao,
Fahendrena, maty adala.
Noho ny fitenenan-dratsy,
Matory, misakafo, miresaka ary milalao.
9, Lalao Fiainana
Lamosin’ny rantsambatana mahantra,
Voalaza fa marikivy ihany koa ny voankazo marikivy voasarimakirana.
Azo antoka fa hamonjy sakafo hariva ny atoandro,
Fa ilay zaza tia vola manenina ny akoho.
Zavatra an-jatony no omena tsiny amin’ny mahantra,
Moanina maro no tsy nanidy ny varavaran’ny tempoly.
Sarotra ny mamatotra ny hendry sy miteny tsara,
Na dia nisy nanakorontana ny farihy aza.
10, Raiso ny Fitsapana Fahafatesana Lesona 1
Manome talenta ahy ny lanitra sy ny tany
Fehikibo ho an’ny andro filalaovana
Tsy vintana amin’ny divay hendry avy amin’ny kaopy
Ny trosa sy ny tononkalo dia tsy maintsy voaporitra
Misy sainam-pitaterana soavaly efa vonona
Misy koa ny klavier bamboo misy fitiavana
Iza no mamo, iza no mifoha, iza no ho resy
izaho no mitafy fa iza no mitafy!
Ny fanangonana tononkalo tsara izay vao hitanao dia ny fanangonana ny “Tononkalo 10 tsara sy malaza nataon’Andriamatoa Quan Nguyen Cong Tru”, ao anatin’ny lisitry ny fanangonana malaza amin’ny tononkalo ankapobeny. Andao hamaky sy hankafy ny sanganasa hafa, maro ny tononkalo tsara miandry anao!
Tianao ve ilay lahatsoratra hoe “Angonin’ny tononkalo 10 tsara indrindra an’i Mr. Quan Nguyen Cong Tru” ao amin’ny sokajy tononkalo tsy mety maty ao amin’ny varavarankelin’ny bilaogy? Raha tianao dia tsidiho matetika ny bilaogiko mba hamakiana ireo lahatsoratra farany ♡ !
Previous: Thủ thuật hay tạo khung trong word để có một văn bản đẹp | Anybook.vn
Next: Điểm chuẩn Trường Đại học Thông tin liên lạc (Sĩ quan Thông tin) | Anybook.vn